लिनक्स र खुला स्रोत मा ट्यूटोरियल - Ikkaro
लिनक्सले मेरो काम गर्ने तरीका र कम्प्युटर, दुबै पीसी र ल्यापटप प्रयोग गर्ने तरीका परिवर्तन गरेको छ।
ओपनसोर्स भएर, यो मेकर संसारसँग जोडिएको छ, ह्याकि,, परिमार्जन, DIY। यदि तपाईंले कहिले यो प्रयास गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ।
यस खण्डमा म कुरा गर्छु र सम्बन्धित जानकारी स collect्कलन गर्नेछु GNU लिनक्स र यो फरक छ वितरण, हामी तिनीहरूलाई जाँच्दैछौं।
के तपाईंलाई थाहा छ लिनक्स भनेको के हो? के तपाईंलाई लाग्छ कि यो तपाईंको लागि होईन? यसले तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ? यसले तपाईंलाई के गर्न अनुमति दिनेछ? के त्यहाँ लिनक्स मा जानकारी छ?
तर यो कम्प्युटर गिक्सका लागि होईन? यसको लागि म तपाईंलाई जवाफ दिन्छु। होइन। जो कोहीले उबन्टु, लिनक्स टकसाल, फेडोरा, इत्यादि जस्ता वितरणहरू स्थापना गर्न सक्दछन्। चरण-देखि-चरण गाईड भिजुअल इंटरफेसको साथ। अत्यन्तै साधारण कन्सोल वा कोडको रेखा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन, सबै माउसको क्लिकमा।
हामी बाँकी प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछौं:।
.Sh फाईलहरू कसरी चलाउने
टर्मिनल र डबल क्लिकको साथ यसलाई कसरी चलाउने पत्ता लगाउनुहोस्
को विस्तार .sh का साथ फाईलहरू फाईलहरू हुन् जसमा स्क्रिप्टहरू, बॅश भाषामा आदेशहरू, जुन लिनक्समा चल्दछ। एसएच एक लिनक्स शेल हो जसले कम्प्युटरलाई के गर्ने बताउँछ।
एक तरीकाले हामी भन्न सक्छौं कि यो विन्डोज .exe सँग तुलना गर्न सकिन्छ।
यसलाई चलाउने विभिन्न तरिकाहरू छन्। म व्याख्या गर्न गइरहेको छु २ एउटा टर्मिनलको साथ र अर्को ग्राफिकल ईन्टरफेसको साथ, त्यो माउसको साथ कि जब तपाई डबल-क्लिक गर्नुहुन्छ यो कार्यान्वयन हुन्छ। तपाईं यसलाई भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ र पारंपरिक ट्यूटोरियलहरू रुचाउनेहरूका लागि चरण-चरण तल छन्।
म संग जारी पीसी र ग्याजेट मर्मत यद्यपि यो आफैमा एक मर्मत मानिएन। तर यो केहि चीज हो जुन हरेक पटक उनीहरूले मलाई अधिक सोध्छन्। केही राख्नुहोस् अपरेटिंग सिस्टम जुन उनीहरूलाई पुरानो वा पुरानो हार्डवेयरको साथ कम्प्युटरहरूमा कार्य गर्दछ।
र यदि मैले तपाईंलाई यस विशेष केसमा गरेको निर्णयको बारेमा थोरै बताएँ भने, यो अझ बढि विस्तार गर्न सकिन्छ। म अद्यावधिक गर्न कोसिस गर्दछु र केस पेश हुँदा प्रत्येक पटक मैले के गरेको छु त्यो छोडिदिन्छु।
कम्प्युटर मर्मतमा लेखहरूको श्रृंखला अनुसरण गर्नुहोस्। साधारण चीजहरू जुन कोही हाम्रो घरमा फिक्स गर्न सक्छन् जब कम्प्युटर खोल्छ तर तपाईं स्क्रिनमा केहि पनि देख्नुहुन्न.
यो लेख मा म एक छोड्छु एनाकोंडा स्थापना गाईड र कसरी तपाइँको कन्ड्या प्याकेज प्रबन्धक प्रयोग गर्ने। यसका साथ हामी पाइथन र आरको ​​लागि विकास वातावरणहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन हामी चाहन्छौं लाइब्रेरीहरूको साथ। मेशिन लर्निंग, डेटा विश्लेषण र पाइथनको साथ प्रोग्रामिंगको साथ गडबड सुरु गर्न धेरै रोचक।
एनाकोण्डा पाइथन र आर प्रोग्रामिंग भाषाहरूको व्यापक प्रयोगमा नि: शुल्क र ओपन सोर्स वितरण हो वैज्ञानिक कंप्यूटिंग (डाटा साइंसडाटा विज्ञान, मेशिन लर्निंग, विज्ञान, ईन्जिनियरि,, भविष्यवाणी विश्लेषक, ठूलो डाटा, आदि).
यसले यी विषयहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने ठूलो संख्यामा अनुप्रयोगहरू एकै चोटि स्थापना गर्दछ, एक एक गरेर तिनीहरूलाई स्थापित गर्नुको सट्टा। । १ 1400०० भन्दा बढी र ती यी शाखाहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिन्छ। केही उदाहरणहरू
लिनक्स संग छ महिना
हालसालै मेरो वातावरणमा धेरै व्यक्तिले मलाई लिनक्सको बारेमा सोधेतिनीहरू पनी यसलाई यो परीक्षणको लागि स्थापित गर्न तपाईले चाहानुहुन्छ। त्यसोभए अब म months महिनाको लागि लिनक्स प्रयोग गर्दैछु, मलाई लाग्छ यो मेरो अनुभव साझेदारी गर्नका लागि राम्रो समय हो।
प्रयोग गर्नुहोस् उबंटु years बर्षको लागि ल्यापटपमा तर गहन तरीका वा कामको लागि होइन, ल्यापटप फुर्सत, ब्राउजि and र केहि अर्डिनो सामानको लागि हो। लामो समय सम्म मैले मेरो पीसीमा केही वितरण स्थापना गर्न कोसिस गरें, तर मेरो पुरानो जीफोर्स २240० टी ग्राफिक्सले समस्या दियो र यद्यपि उनीहरूले मलाई समस्याहरू सुधार्न र सहि ड्राइभरहरू स्थापना गर्न मद्दत गर्न खोजे, अन्तमा म थाकिएँ र विन्डोज with को साथ जारी राखें। र तब १०. मैले डेबियन उबन्टु, लिनक्स टकसाल, र केहि अधिक प्रयास गरेँ र मैले कुनै स्थापना गर्न सकेन। सत्य यो हो कि मैले अब डिबियनमा आधारित नभएको केहि प्रयास गरेको छुइन।
तर केहि महिना अघि म USB मा एक मन्जारो डिस्ट्रो तयार थियो र मलाई लाग्यो किन छैन? र हेर्नुहोस् यो कहाँ काम गर्दछ र पनि महान। मन्जेरोलाई माया गर्छु। म यस वितरण को बारे मा एक महीना को लागी प्रयोग गरीरहेको छु र म यसको थीम माईया को साथ प्रेम गर्न को लागी। तर त्यहाँ एक अद्यावधिक थियो जसले सबै Nvidia (रोलिling रिलिज सामानहरू) मा फेरि समस्याहरू प्रदान गर्‍यो त्यसैले मैले कुबन्टुलाई प्रयास गरें, जुन यो स्थापना गर्न सक्षम छैन र कुनै समस्या थिएन। र त्यसैले म दिनको in महिना भन्दा बढि कुबन्टु प्रयोग गर्दैछु.
उबन्टुसँग मेरो पहिलो प्रभाव
म दुई हप्ता देखि उबुन्टु प्रयोग गर्दैछु। लेख पोष्ट पछि कसरी यूएसबी बाट उबुन्टु प्रयोग गर्ने मैले विन्डोज with को साथ यसलाई स्थापना गर्ने निर्णय गरें।
अत्यन्तै साधारण स्थापना, उही यूएसबीबाट, पार्टिसनहरू आफैंले बनायो, र or वा clic क्लिकहरूसँग काम गर्न र त्यसपछि आश्चर्यचकित आइपुग्यो।
USB बाट उबन्टु लिनक्स प्रयोग गर्नुहोस्
यो पीसीको लागि आउँदा यो सप्ताहन्त कालो सप्ताहन्त भयो। समस्याको साथ लामो समय पछि, मेरो विन्डोज भिस्टाले काम गर्न रोक्ने निर्णय गर्यो।
धेरै ढाँचा-स्थापना-स्वरूपण-स्थापना पछि, यस्तो लाग्छ कि विन्डोज ले मैले भनेको कुरा सुन्दछ, जे होस् मसँग अझै आधा हार्ड डिस्क छ जुन हटाइएको छैन।
त्यसैले मैले अन्य विकल्पहरू पनि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छु, जुन लिनक्स वितरण मार्फत जान्छन्। को पृष्ठ मा फेसबुकबाट Ikkaro, मलाई उबन्टु सिफारिस गरिएको छ, जसको बारेमा मैले पहिले नै धेरै कुरा सुनिसकेको छु।